Siyaasadda Khaaska ah iyo Diidmada - Block by Block - City of Lancaster, PA Qorshaha Istaraatiijiga
Boggaga internetka ee magaalada Lancaster waxaa loogu talagalay inay ka dhigto mid fudud oo wax ku ool ah muwaadiniinta iyo ganacsiyada si ay ula macaamilaan dawladooda hoose iyo dawladaha hoose. Laakiin sida ilaha internetka oo dhan, waxaanu ku qanacsanahay in dad badan oo booqanaya boggayaga ay ka walaacsan yihiin asturnaanta. Magaalada Lancaster waxay ka go'an tahay inay ilaaliso asturnaantaada markaad booqato boggayaga.
Nidaamkani wuxu wax ka qabtaa ururinta, amniga iyo helitaanka macluumaadka laga yaabo in laga helo iyada oo loo marayo isticmaalka goobaha ay hayso Magaalada Lancaster. Nidaamkan wuxuu daboolayaa mawduucyada soo socda:
Macluumaadka aan soo uruurino
Macluumaadka la soo ururiyay
Haddii aad booqatid shabakada internetka ee ay maamulaan Magaalada Lancaster si ay u akhristaan ​​ama u soo helaan macluumaadka, waxaanu soo ururineynaa macluumaadka soo socda:
Magaca domainka; tusaale ahaan, "xcompany.com" haddii aad isticmaasho kumbuyuutar gaar ah, ama "yourschool.edu", haddii aad isku xirayso jaamacadda;
Cinwaanka IP; lambar si toos ah loogu qoondeeyey kombiyuutarka markaad internetka isticmaasho;
Nooca badeecadda iyo habka socodsiinta loo adeegsado si loo helo boggayaga;
Cinwaanka Internetka ee website-ka kaas oo aad si toos ah ugula xiriirtay boggayaga;
Bogagga aad ku booqan karto bogga magaalada; iyo
Xidhiidhada loo sameeyay boggaga internetka iyada oo loo marayo meeshan.
Macluumaadkan waxaa loo ururiyaa falanqaynta tirakoobka iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada barnaamijka sadexaad ee barnaamijka si loo abuuro tirakoob kooban. Isticmaalka tirakoobka waxaa loo isticmaalaa ujeedada lagu ogaanayo macluumaadka ay tahay midka ugu yar ee danta guud ee soo-booqdayaasha iyo aqoonsashada qaabka nidaamka ama meelaha dhibaatooyinka. Macluumaadkan looma ururin ujeedooyinka suuq-geynta ganacsiga iyo Magaaladu ma iibinayso macluumaadka la soo ururiyey ee internetka ujeedooyinka suuq-geynta ganacsiga.
Haddii, inta lagu jiro booqashadaada bogagga internetka ee magaalada, waxaad si ikhtiyaari ah u bixisaa macluumaad shakhsi ahaan loo aqoonsan karo, waxaanu ururin doonaa macluumaadkan. Tusaalooyinka macluumaadka shaqsi ahaan loo aqoonsan karo waxaa ka mid ah:
Cinwaanka emailka haddii aad nala soo xiriirto adoo adeegsanaya email;
Macluumaadka aad si ikhtiyaari ah u soo gudbinayso Magaalada si aad u buuxiso ama u soo gudbiso arjiga ama foomka internetka; iyo
Macluumaad kale oo tabaruc ah, sida macluumaadka sahanka ama waxyaabaha emailka ah.
Guud ahaan, fadlan xasuuso macluumaadka la ururiyey, iyo haddii aan shakhsi ahaan loo aqoonsan karin, aysan ku koobnayn calaamadaha qoraalka, waxaana ku jiri kara maqalka, video iyo qaababka kale ee qaababka ee aad noo soo dirto. Macluumaadka waxaa lagu hayaa si waafaqsan sharciyada jira iyo siyaasadaha Magaalada.
Sida caadiga ah, Magaalku ma sheegayo macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo internetka marka laga reebo meesha aad na siisay ogolaansho, ama meesha xogtu tahay macluumaad guud oo hoos timaada Xeerka Xuquuqda Inaad Ogolaansho Joogto 65 PS 66.1 ama sirta kale ee sharcigu khuseeyo. Soo-booqdayaashu waa inay ogaadaan in macluumaadka ay soo uruurisay Magaalada ay ku qoran tahay boggeeda internet-ka laga yaabo in lagu sameeyo baaritaan iyo kormeer, haddii macluumaadka noocaas ahi yahay diiwaan dadweyne oo aan lagu ilaalin shaacinta.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo ee aad ku gashid profileska ayaa kuu furan oo laguu heli karaa si dib-u-eegis loogu sameeyo. Haddii aad qabtid wax su'aalo ama faallooyin ah oo ku saabsan macluumaadka lagu soo bandhigay Qorshaha Khaaska ah, fadlan la xiriir City of Lancaster.
Waxaad diidi kartaa ka qaybqaadashada waxqabad kasta oo ku saabsan macluumaadka (sida, sahan ama emayl). Doorashadaada inaad kaqaybqaadato wax saameyn ah kuma yeelan karto awoodda aad ku heli karto macluumaadka bogagga internetka ee magaalada.
Si aad si wanaagsan kuugu adeegto, waxaan mararka qaarkood isticmaalnaa "cookies" si loo saxo khibradaada daalacashada. Kukiyada waa faylasha qoraalka fudud oo lagu keydiyo barta internetkaaga waxayna bixiyaan hab lagu kala soocayo dadka booqanaya boggaga internetka.
Kukiyadaha lagu abuuray kombiyuutarka adiga oo adeegsanaya boggayaga internetka kuma jiraan macluumaadka shakhsi ahaan loo aqoonsan karo oo aan hakinaynin asturnaantaada ama amnigaaga. Waxaan u isticmaali karnaa habka cookie-ka ee ku duuban qoraalka aqoonsiga oo si aan kala sooc lahayn loo isticmaalo kombuyuutarkaaga. Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan cookies, Unugga Qalabaynta La-talinta Dhibaatada Kumbuyuutarka ee kormeeraya dhibaatooyinka kombiyuutarka ee Wasaarada Tamarta ee Mareykanka waxay soo saartey daraasad ku saabsan March 12, 1998, halista isticmaalayaasha cookies, oo cinwaankeedu yahay "Bulletin Information 1-034: Internet Cookies. "
Waxaad diidi kartaa cookie ama waxaad ka tirtiri kartaa faylka cookie ee kombiyuutarka wakhti kasta adigoo isticmaalaya mid ka mid ah habab badan oo la heli karo.
Tallaabooyinka amniga waxaa lagu dhejiyey hawlaha naqshadeynta, hirgelinta iyo hawl maalmeedka dhammaanba jawiga hawlgalka iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeena joogtada ah ee nabadgelyada elektaroonigga ah iyo weliba gudbinta elektarooniga macluumaadka.
Xaaladaha qaarkood, waxaad heli doontaa fursad aad ku hesho ama sameysid sir ah si aad u hesho ama u gudbiso macluumaadka shakhsiyeed. Waa inaadan u sheegin sirtaada qof kasta, Cityna marnaba kuma weydiin karto furahaaga sirtaada wicitaan taleefan oo aan taleefoon ah ama e-mail. Markaad buuxiso codsiyadaas oo ah lambarka sirta ah, waa inaad ka baxdid bogga.
Magaaladu waxay bixisaa xirriiryo kale oo ku yaal boggaga kale ee dowladda Federaalka, Gobolka iyo dowladda hoose. Waxaan sidoo kale bixinnaa xiriiryo shabakadaha kale ee ururada si loo siiyo martida macluumaadka qaarkood. Xidhiidhka ma aha mid ku salaysan kalsooni darro, aragti, siyaasado, alaabo ama adeegyo shabakadan. Marka aad isku xiriiriso websaydh kale oo aan ku haynin magaalada, waxaad ku jirtaa shuruudaha iyo shuruudaha shabakadaas, oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidneyn siyaasadeeda asturnaanta.
Macluumaadka lagu bixiyo bogagga shabakadaha magaalada waxaa loogu talagalay inay u oggolaadaan in dadweynaha si dhakhso ah u helaan macluumaadka dadweynaha. Inkasta oo dhammaan isku dayga la sameeyey si loo bixiyo macluumaad sax ah, hadda iyo la isku halleyn karo waxaan aqoonsanaa suurtogalnimada qaladka aadanaha iyo / ama qalabka farsamada. Sidaa darteed, City of Lancaster, shaqaalaheeda, saraakiisha iyo wakaaladaha waxay si cad u diidaan wixii damaanadqaad ah ee saxsanaanta, kalsoonida ama wakhti kasta ee macluumaadka lagu daabaco nidaamkan, loomana xisaabin doono wixii khasaare ah ee ay sababtay ku tiirsanaanta saxnaanta, macluumaadka noocaas ah. Qof kasta oo ku tiirsan macluumaadka noocaan ah ee laga helo nidaamkaan ayaa sidaas sameynaya khatarta uu leeyahay.
Magaalada Lancaster waxay bixisaa "Google Translate" oo ah ikhtiyaarkaaga si ay kaaga caawiso akhriska bogagga luuqadaha aan Ingiriisiga ahayn. Giriiggu wuxuu turjumi karaa dhamaan noocyada dukumeentiyada, mana heli karo turjumaad sax ah. Qof kasta oo ku tiirsan macluumaadka laga helo Google Translate wuxuu sidaa u yahay khatartiisa. Magaalada Lancaster ma sameyso wax ballan ah, ballanqaadyo, ama dammaanad ku saabsan macnaha tarjumaadaha, hawlaha gaarka ah ee Galka Ganacsiga Google, ama kalsoonida, helitaanka, ama awooda lagu daboolayo baahiyahaaga.
Magaalada Lancaster, saraakiisheeda, shaqaalaha, iyo / ama wakiilada looma ciqaabi karo magdhow ama khasaaro nooc kasta oo ka soo baxa, ama ku xiran, isticmaalka qalabka Google Translation, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, magdhow ama Khasaaro ay sababtay ku tiirsanaanta saxda ah ee tarjumaadda, ama magdhow laga soo jeediyay aragtida, qaybinta, ama nuqul ka mid ah qalabkaas.